Prince Charles, marka loo caleemasaaro Boqor, kuma noolaan doono Buckingham Palace – Kasmo Newspaper
Prince Charles, marka loo caleemasaaro Boqor, kuma noolaan doono Buckingham Palace
Updated - September 24, 2017 1:35 pm GMT
London (Kasmo), Prince Charles, oo 68 jir ah, marka hooyadii uu dhaxlo, Boqorna noqdo, ma degi doono Qasriga Buckingham Palace, sida Amiirradii hore, sidaasna waxaa lagu xusay Warbixin Warbaahinta UK ka hadashay toddobaadkii hore..
Dhaxal-suge Charles wuxuu qabaa in Qasri sidaan u mug weyn una kharaj badan ku habboonayn casrigaan aynu ku noolnahay: wuxuuna u beddeli doonaa xafiisyo iyo qolalkiisa waaweyn oo daawashada dadweynaha loo furo.
Qayb ka mid ah dhismaha waxaa loogu talagali doonaa bandhig laga dheehdo Elizabeth iyo Boqortooyadeeda muddada dheer. Xitaa wiilka uu dhalay Charles ee William wuu la qabaa: fikradda isaga, Kate iyo carruurtu in ay maalin malmaha ka mid ah u guuraan “Big House” waa ku jiriiricoonayaan.
Marka laga reebo dalxiisayaasha iyo martida reer Boqor, Buckingham Palace cidina waligeed ma jeclaan, laga soo bilaabo 1837kii, markii Victoria noqotay middii ugu horreysay Amiirradii hore oo Qasrigaas degaan rasmi ah ka dhigatay.
Waagii Victoria meel kasta wax baa ka soo gufaaci jiray, hawada gudihiisuna ma fiicnayn, sabaradahana qiiq ayaa ka bixi jiray; markii Elizabeth timidna wuxuu isu beddelay xaruntii jiirka iyo baranbarada. Dabayshu daaqadaha ayay ka foorinaysaa, qolalkuna qabow daran ayaa ka jira.
Dhanka kale waa adagtahay in nidaamkiisu fiicnaado Qasri gaboobay oo ku fadhiya 77,000 oo mitir oo labajibbaaran, kana kooban 775 maqsin, 52 qol jiif, 92 xafiis, 188 qol oo adeege iyo 78 musqulood.
Runtii dayactirkiisa ayaaba ku nacsiinaya: gidaarrada lama caddeyn tan iyo 1952kii, kulaylisada biyaha “Boilers” waa 33 jir, xargaha korontadu waa 60 jir, waxaana jira 30 mitir oo dhuumaha biyaha oo maar sumowday noqday, baddelna u baahan.
Wargayska “Guardian” ayaa kashifay farsamo-yaqaan Tubiiste ah oo u tagay in uu dayactiro musqusha gaarka ah ee Boqoradda, markii uu soo jiiday xariggii biyaha, haantii darbiga saarnayd, dushiisa ku soo dhacday.
Charles wuxuu haystaa Qasriyo iyo Daaro badan oo uu ka xusho midkii uu ka dhigan lahaa degaanka cusub ee Boqorka, sida Windsor oo u dhow garoonka diyaaradaha Heathrow, laakiin wuu ka sii weynyahay, kana qaab daranyahay Buckingham Palace.
Waxaa kale oo jira guriga qoyska Sandringham ee Norfolk, Qasriga Balmoral ee Scotland iyo guriga dibadda magaalada, Highgrove ee Gloucestershire, laakiin midkoodna degaan kuma habboona.
Wargayska “Sunday Times” oo kashifay ujeeddada Amiirka Galles uu ka qabo guuritaanka, Charles iyo Camilla waxay joogi doonaan halka hadda ay ku noolyihiin: Clarence House, dhismaha taariikhi ah ee 4ta dabaq ah.
Kaas oo ku dhow St.James’s palace, 2 tillaabana u jira Buckingham palace, laakiin runtii, degaan ahaan ku yar dhaxalsugaha Boqortooyada Britain.
Xukunka Charles wuxuu soo afjari doonaa caadooyin badan, sida xafladdii soojireenka ahayd ee is-baddelka ilaalada Qasriga, mid ka mid ah dhacdooyinka ugu sawir-qaadka badan London.
Waa adkaan doontaa in dadweynihii hor dhoobnaan jiray dhismaha ugu caansan Dunida, sidoo kale lagu arko Clarence House hortiisa, waa dhammaadkii xilli taariikheed iyo bilowgii mid kale oo ka casrisan, laakiin ka xiiso yar.